'Duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi oo dib loo billaabi doono' - BBC News Somali
23 Maarso 2017
Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in laba isbuuc gudahood dib loo billaabi doono duulimaadyada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi, iyadoo meesha laga saari doono in lagu sii hakado garoonka ku yaalla magaalada Wajeer ee gobalka Waqooyi bari Kenya.
Hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdullaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku joogo Kenya.
"Waxaan amar ku siinay mas'uuliyiinta ammaanka ee labadeena dal inay si deg deg ah u kulmaan kuna heshiiyaan qaabkii ay u dib ugu billaabi lahaayeen duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi iyadoo duulimaadka ugu horreeyana aan fileyno laba isbuuc gudahood", ayuu yiri Kenyatta.
Dowladda Kenya ayaa horay u ballan qaaday inay xayiraada duulimaadyada tooska ah qaadi doonto wixii ka billowdo bishii Desember ee sanadkii hore, balse taa ma dhicin, mana jirin wax sharraxaad ah oo laga bixiyay.
Wasiirka arrimaha dibedda Kenya Aamina Maxamed ayaa bishii September ee sanadkii hore warfidiyeenada u sheegtay in la qaadi doono xayiraadaasi mar ay Muqdisho uga qeybgeleysay shirka IGAD.
"Waa in meesha laga saaro joojinta diyaaradaha Muqdisho ka baxa ee Nairobi u socda kuwaasoo lagu hakiyo Wajeer balse waa in laga shaqeeyo ammaanka labada garoon Muqdisho iyo Jomo Kenyatta, ka hor inta aan arrintaasi la hirgelinin" ,ayey tiri wasiirka arrimaha dibedda Aamina Maxamed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyay go'aankaasi isagoo sheegay in rajeynayo inuu dhaqangalo laba isbuuc ka dib.
Labada madaxweyne waxay sidoo kale ku heshiiyaan in dib loo fura xadka labada dal oo ay dowladda Kenya xirtay 2007dii sababa dhinaca ammaanka ah.
Muddo 30 mlamaood gudahood ayaa dib loo furi doonaa marinada xadka labada dal ee Beled-xaawo---Mandheera iyo Libooy---Doobley.
inkastoo xadka uu si rasmi ah u xirnaa, haddana saameyn weyn kuma yeelan isku socodka dadka iyo badeecooyinka.
Madaxweynaha Soomaaliya waxaa la filayaa in uu ka qeyb galo kullan gaar ah oo madaxda waddamada IGAD ku yeelan doonaan Nairobi maalinta Sabtida ah.
Kullankan oo ay marti gelinayso Kenya waxaa lagu eegi doonaa xaaladda abaarta iyo sidii wax looga qaban lahaa, arrinta qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya doonayso in ay dib ugu celiso Soomaaliya, Xaaladda ammaanka, iyo dabcan taageerada IGAD ee kullanka Soomaalida ee lagu qaban doono London bisha May ee soo socota.
Image caption Ka dib kulankooda labada madaxweyne waxay qabteen shir jaraa'id
Kenya waxay ka mid tahay dalalka ciidammada ku biiriyey hawlgalka Amisom, waxayna door muhiim ah ka qaadanaysaa ammaanka Soomaaliya.
Sidoo kale Kenya iyo Soomaaliya waxaa dhex yaala muran ku saabsan xuduudda badda arrintaasi oo haatan hor taala maxkamada caalamiga ah ee ICJ
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii ugu horaysay tan iyo markii la doortay fursad u heli doona in uu la kulmo hoggaamiyaasha dalalka IGAD oo afar ka mid ah ciidammadooda ay ka howlgalaan Soomaaliya. Dalalkaasi waxay kala yihiin Kenya, Itoobiya, jibouti iyo Uganda.
Kullankan IGAD oo ay sidoo kale riixayso hay'adda Qaramada Midoobay ee Qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa la filayaa in la isku waydaarsado fikrado ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo abaari karo arrinta dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku sugan.
Kenya ayaa sheegtay in ay albaabada u laabayso xerada qaxootiga ugu wayn dunida ee Dadaab meesha lagu gaaro bisha afraad ee sanadkan, waxayna bilawday qorshe uu qaxootigu iskii dib ugu laabanayo Soomaaliya.
Balse su'aasha la isweydiinayo ayaa ah qaxootiga dib ma loogu celin karaa Soomaaliya xilligan oo dalka ay ka jiraan abaaro iyo cabsi ah in ay dhacdo macaluul.